'ဒီနစ်မြုပ်နေတဲ့စီးတီး' ဟာ Gameplay နောက်တွဲအသစ်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း 'ဒီနစ်မြုပ်နေတဲ့စီးတီး' ဟာ Gameplay နောက်တွဲအသစ်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ
by Waylon ဂျော်ဒန် မေလ 23, 2019
ကရေးသား Waylon ဂျော်ဒန် မေလ 23, 2019
Frogwaresအလွန်အမင်းမျှော်လင့်ပါတယ် အဆိုပါနစ်မြုပ်ခြင်းစီးတီး အသစ်ထွက်ရှိသည့်နောက်တွဲယာဉ်နောက်တွဲတစ်ခုဖြင့်လာမည့်ဖြန့်ချိရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
HP Lovecraft ၏လက်ရာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်း၊ အဆိုပါနစ်မြုပ်ခြင်းစီးတီး ကစားသမားများကိုပုဂ္ဂလိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူ Charles Reed ၏ဖိနပ်တွင်ထည့်လေ့ရှိသည်။ သူသည်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ Oakmont မြို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရင်းစိတ်ထဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီးဝင်နေသောရူးသွပ်ခြင်းကိုကုသရန်ရှာဖွေသည်။
Lovecraftian lore နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများသည်စာရေးဆရာများ၏ဖန်တီးမှုများ၊ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်နေရာများမှသက်ကြီးရွယ်အိုဘုရားများထံမှပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
အဆိုပါလှည့်ကွက်? သင်လုံးဝမစားမီသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရူးသွပ်မှုနှင့် Oakmont တို့၏ရောဂါပျောက်ကင်းမှုကိုရှာဖွေပါ။
နောက်တွဲယာဉ်အသစ်သည်လာမည့်ဖြန့်ချိမှု၏ဘယ်တော့မှမမြင်ဖူးသောရိုက်ကူးမှုနှင့်အတူ Oakmont ၏ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်နှင့်ရူးသွပ်မှုအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်သည်။
Frogwares အဖွဲ့သည်ယခုနှစ် EA3 တွင် PS27, XBox နှင့် PC များအတွက်ဇွန်လ ၂၇၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဂိမ်းမတိုင်မီဂိမ်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနောက်တွဲယာဉ်အသစ်ကိုစစ်ဆေး။ ၀ င်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ အဆိုပါနစ်မြုပ်ခြင်းစီးတီး!
FrogwaresHP က Lovecraftအဆိုပါနစ်မြုပ်ခြင်းစီးတီးWaylon ဂျော်ဒန်
Trailer: New Revenge Thriller 'The Nightingale' သည် 'Babadook' ၏ဒါရိုက်တာမှဖြစ်သည်။
Shudder သည်ရာသီ ၂ အတွက် 'ဂျိုးဘော့ဘရစ်ဂ်ျနှင့်အတူနောက်ဆုံး drive' ကိုသက်တမ်းတိုးခဲ့သည်